भाईरल भयो अञ्जली अधिकारीको यो डाण्स स्टेप.. (भिडियो सहित) हेर्नुहोस्
August 5, 2020 1449
पछिल्लो आफुभित्र रहेको प्रति’भा सबैको सामु छिटो र ‘सजिलै देखाउन सकिने ग’तिलो माध्यम बनेको चिज हो टिकटक।
प्राय धेरैजसोले पछिल्लो समय टिकटक प्रयोग गर्ने गरे’को पाइएको छ। टिकटकमा कतिप’यले राम्रो भि’डियो हालेका हुन्छन् त कतिपयले नराम्रो पनि।यसैबी’च, पछिल्लो केही हप्ता एउटा गीत अनि त्यस गीतको भिडियोमा समाबेश डान्स स्टेप टिक’टकमा अत्याधिक रुचाइएको छ।
त्यो डान्स स्टेप हो मो’डल रुबिना अधिकारी र अञ्जली अधिकारीको। “सोचेझै जिन्दगी रैनछ” बोलको तीज गीतको भिडियोमा रुबिना, अन्जली’का अलवा लोमश शर्मा र ओबी राय’माझीले गरेको स्टेपलाई धेरैले रुचाउनु’का साथै फ्लो पनि गरेका छन् ।
गीतले “सोचेझैं जिन्द’गी रैनछ” भन्दै गर्दा टाउकोमा हात राखेर हल्लाउने उनीहरूको त्यो डान्स स्टेपमा यो समाचार तयार पार्दास’म्म करिव १ लाख बढी टिकटक प्रयोगक’र्ताले भिडियो बनाएका छन् । भ्युज पनि मिलियन बढी गएको छ टिकटकमा। टिकटकमा मात्र नभएर उनीहरूको त्यो डान्स स्टेपलाई लि’एर युटुबमा पनि दर्शकले राम्रो प्रति’क्रिया दिएका छन् ।
युटुबमा पनि उक्त गीतको भिडि’यो मिलियन बढी हेरिएको छ। सामाजिक सन्जाल फेसुबु’कमा पनि उनीहरूको डान्स स्टेपलाई तारिफ गर्दै सेयर गरिएको छ। यसरी आफुले डान्स गरेको स्टेप’लाई अत्याधिक रुचाइपछि रुबिना यतिबेला मख्ख छिन् ।
आफ्नो’ डान्स स्टेपलाई लिएर टिकटक, युटुब लगा’यत फेसबुक जस्ता सामाजिक सन्जाल’मा चौतर्फी तारिफ पाएको क्षण रुबिनाको पहिलोपटक हो। सबैजनाले रुचाइदिँदा आगामी दिन’मा झन राम्रोसंग मिहिनेत गर्दै अगाडि बढ्ने रुबिना बताउँछिन् ।
यस तीजमा मात्रै रुबिनाले ७/८ वटा तीज गीत’मा डान्स गरेकी छिन् । तर दर्शकले अत्याधिक रु’चाएको गीत भने यही “सोचे झैँ जिन्दगी रैनछ” हो। पछिल्लो’ समय आफुले डान्समा निकै मिहिनेत गरेका कारण म्युजिक भिडियोमा आउटपुट राम्रो आए’को हुनसक्ने रुबिना बताउँछिन् ।
त्यस्तै, यसै गीतमा डा’न्स गर्ने लोमश र ओबीको पनि यसरी सबैजनाले रुचाइदिएको डान्स स्टेप पहिलो हो। तर अञ्ज’लीको भने यस भन्दा अगाडि थुप्रै गी’तका स्टेप लगायत डान्स दर्शकले अत्याधिक रुचाएका छन् ।
गीतमा खेम सेन्चुरी र मधु क्षेत्रीको सुमधुर आवा’ज रहेको छ। गीतमा नेत्र अर्यालले शब्द लेखेका हुन् भने संगीत खेम सेन्चुरीले नै गरेका हुन् । गीतको भिडियो खेम सेन्चुरीको अफिसि’यल युटुब च्यालनबाट सार्वजनिक गरिएको हो।
भिडियो’लाई प्रकाश भट्ट’ले कोरियोग्राफी तथा निर्देशक गरेका हुन् । त्यस्तै, नबराज उप्रेतीले खिचेको भिडियोलाई विष्णु श’र्माले सम्पादन गरेका हुन् । – तुफान न्युज
Prevआज साउन २१ गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
Nextसानी दोहोरी गायिका आयुषासंग अमृतले पनि हारे दोहोरीमा (हेर्नुस् भिडियो)
आज एकैदिन ३२३ संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्..
उपचार गर्दागर्दै बुवाआमाले छाडेर हिँडे, शिशुको अस्पता’लमा मृ’त्यु
नवराजको साथी भनिने युवक अन्तर्वाताकै क्रममा भागेपछि पत्रकारले समातेर लाए प्रहरीको जिम्मा(भिडियोसहित)
आत्मह’त्या अगाडि शुसान्तले गुगलमा यस्तो सर्च गरेका रहेछन्, बाहिरियो फोरे’न्सिक रिपोर्ट
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (65664)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (63462)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52369)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (51684)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (51195)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (47065)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46814)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41680)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (39156)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (34004)
४ वटै हात खुट्टा नभएका ११ वर्षीय भाइ, सबै काम आफै गर्छन तर हात छैन भन्दै धर’धरी रोए (भिडियो)
सेलीब्रेटीको हर्कत: बच्चा`लाई दूध पिलाउँदै रेड`वाइनमा मस्त भए`पछी…
भारतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा रामदेवसँगको तस्बिर भाईरल, बाबा रामदेव ड्राइभर बनेर…
आज नयाँवर्षको पहिलो दिन, तपाईंको आजको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नु`होस्